Fiteny kibosy - Wikipedia
Ny fiteny kibosy na fiteny sibosy na fiteny bosy dia fiteny ao Maiôty tenenin' ny olona miisa 47 900 tamin' ny taona 2012. Izy no fiteny ibeazeana faharoa ao amin' io nosy io izay manao ny fiteny frantsay ho fiteny ôfisialy. Endriky ny fiteny malagasy ny fiteny kibosy ka isan' ireo fiteny malaio-pôlineziana ao amin' ny fianakaviam-piteny aostrôneziana. Manakaiky ny fiteny malagasy tenenina any amin' ny faritra avaratra-andrefan' i Madagasikara (Antsiranana sy Mahajanga) ny fiteny kibosy. Endriky ny fiteny kibosy ny fiteny kiantalaotsy sy ny fiteny kibosy kimaôre.
Ireto ny tanàna sasany ao Maiôty itenenana kibosy: Bambo-Est, M'Bouini (na M'Boueni), Passi-Kéli, M'Ronabéja, Kani-Kéli, Chirongui, Poroani, Ouangani, Chiconi, Sohoa, M'Tsangamouji, M'liha, Acoua, Mtsangadoua, Hamjago, Dapani, Mtsamoudou.
Fiteny antambahoaka, antandroy, antankarana, antanosy, antefasy, antemoro, antesaka, bara, betsileo, betsimisaraka avaratra, betsimisaraka atsimo, bezanozano, mahafaly, masikoro, merina, sakalava, sihanaka, tanala, tsimihety, vezo, zafisoro.
Fiteny kibosy, antalaotra, kibosy kimaôre
Fiteny ao Maiôty
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_kibosy&oldid=1045656"
Dernière modification le 9 Jiona 2022, à 13:39
Voaova farany tamin'ny 9 Jiona 2022 amin'ny 13:39 ity pejy ity.